SomaliTalk.com » 2017 » July » 21
Home » Archive Maalinta July 21st, 2017
Muqdisho, 19 Luulyo 2017; Madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxaa munaasabad saagootin ah loogu qabtay Safiirkii dalka Sweden Mr. Mikael Lindvall oo muddo gaaraysa 5 sano ka shaqaynaayey dalka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga, Xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka iyo saraakiisha Madaxtooyada ayaa Safiirka qado sharaf...
Madaxweyne Farmaajo “Waa in sida ugu dhaqsiyaha badan lagu joojiyaa dagaalka ka socda Xeeraale ”
Muqdisho, 21 Luulyo 2017: Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku baaqay in si deg deg ah loo joojiyo dagaalka kataagan agagaarka deegaanka Xeeraale ee Gobolka Gal-guduud. Madaxwaynuhu waxa uu sheegay in colaaddaan ay tahay arrin foolxun, nasiib darro ah oo aan loo dulqaadan karin in ay sii socoto. Madaxwaynaha ayaa sheegay in Dowladda Federaalka...
Muqdisho, 20 July 2017 – Golaha Wasiirada ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulankoodii caadiga ahaa oo uu shir-guddoominayey Ra’iisal Wasaaraha Xukuumada Mudane Xasan Cali Kheyre. Arrimaha kulanka looga hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa Amniga, hindise sharciyeedyada, waxqabadka wasaaradda Gargaarka iyo arrimo kale. Ra’iisul Wasaaraha ayaa Wasiirada Amniga, Difaaca iyo...